Ingabe iNetflix iphansi manje? Hlola Isimo Esibukhoma - Ungakwenza Kanjani
Ingabe iNetflix iphansi manje? Hlola Isimo Esibukhoma
Ngakho-ke, kunezikhathi lapho uphakathi kwanoma yiluphi uhlelo lwe-TV noma i-movie. Kepha, ngokuzumayo iNetflix ngeke isalayisha. Ungaqhubeka uzama ukucindezela inkinobho yokudlala. Kodwa, noma kunjalo, uyehluleka ukuyibuka.Sonke siqinisekile ukuthi iNetflix inokwethenjelwa impela. Kepha, noma yiziphi izinhlelo zokusakaza kungenzeka zingakwazi ukubhekana nezinkinga ezihambisana nokuxhumeka kwe-inthanethi.
Kunezikhathi lapho i-Netflix yehle khona phambilini futhi siqinisekile ukuthi izophinde yehle futhi kungekudala. Isizathu kungaba yizinkinga ezithile zokuxhumeka kwe-inthanethi. Uma lokho kwenzeka kuwe, awudingi ukwethuka. Ake sibone ukuthi ungathola kanjani ukuthi ngabe i-Netflix iphansi impela noma uma inkinga ivela ohlangothini lwakho.
Kukhona nezikhathi lapho uthola khona imilayezo efana nokuthi 'Lesi Sihloko Asitholakali Ukubuka Ngokushesha'. Ngabe ucabanga ukuthi kukhona yini okukhungathekisa ngaphezu kokuthola lowo mlayezo? Bese uzama esinye isihloko. Kepha, uthola umyalezo wephutha ofanayo kusihloko ngasinye esisemtatsheni wakho wezincwadi? Yebo, lezi ngezinye zezinkinga abaningi bethu ababhekana nazo lapho sisebenzisa iNetflix.
Izinkinga Zokuxhumana Kwenethiwekhi yeNetflix?
Imvamisa lapho iNetflix ibhekene nenkinga yokuxhunywa kwenethiwekhi, uzobona enye yezinto ezine okungukuthi, noma ngabe iNetflix izokwehluleka ngokuphelele ukulayisha noma mhlawumbe iNetflix izolayisha kancane, uzothola umyalezo wephutha, noma nje ukuthi iNetflix izolayisha kepha iwine 'Angikuvumeli ukuthi udlale isihloko. Ngenhlanhla zonke lezi zinkinga zilula ukubhekana nazo.
Ungasithola Kanjani Isilingo Samahhala seNetflix?
Ama-Movie Ahamba Phambili Ama-50 Okubukwa Ku-Netflix
INetflix Ihluleka Ngokuphelele Ukulayisha:
Kungaba nezikhathi lapho ikhasi lingeke lilayishe nakancane uma ukudeskithophu. Noma uzama ukungena kuNetflix kusuka ku-smart TV, Roku, uhlelo lokudlala, ithebhulethi yakho, noma iyiphi i-smartphone, ngeke nje ikulayishe. Ngakho-ke, uma ubhekene nezinkinga futhi ungakwazi ukufika ku-Netflix nhlobo kunethuba elikhulu lokuthi izingqinamba zokuxhuma zivela ohlangothini lwakho.
Ongakwenza, sebenzisa yona le nto ozama ukuyibuka iNetflix ukuvula noma iyiphi enye ingxenyekazi yokusakaza noma uye kunoma iyiphi iwebhusayithi. Uma lelo elinye ipulatifomu noma iwebhusayithi ilayisha, kuyamangalisa. Lapho-ke uzokwazi ukuthi le nkinga empeleni ihlobene neNetflix. Uma ingalayishi, khona-ke kungcono ukucisha yonke into uphinde uphinde usebenzise i-router yakho.
Futhi, qiniseka ukuthi ipulatifomu oyisebenzisayo nohlelo lwakho lokusebenza lweNetflix zisesikhathini. Lapho usukwazi ukuthi i-inthanethi yakho ibuyile futhi isebenza kahle bese ubheka noma yiziphi izibuyekezo zohlelo lokusebenza lweNetflix.
Imithwalo Engaphansi yeNetflix:
Le enye inkinga okungenzeka ukuthi abasebenzisi bayo abaningi bahlangabezane nayo lapho besakaza kudeskithophu. Iwebhusayithi eyinhloko yeNetflix nephrofayili yayo izolayishwa, kepha iwebhusayithi imnyama ngokuphelele noma iqukethe izikhala ezinkulu ezinye zezihloko ezingekho.
Ungalungisa le nkinga ngokuvuselela ikhasi ngokushesha. Konke okudingeka ukwenze, uvuselele ikhasi izikhathi ezimbalwa kuze kube i-Netflix ibuyele kokujwayelekile.
INetflix ikhombisa umlayezo wephutha:
Uma uqhubeka nokuthola ikhodi yephutha khona-ke kufanele wazi ukuthi unenkinga yangempela lapha. Akunandaba ukuthi uzama ukuvuselela kangaki i-Netflix, uzoqhubeka nokuthola ikhodi yephutha elifanayo.
Uma uthola ikhodi yephutha lapho uzama ukubuka i-movie noma okuthile, vele uye ekhasini losizo le-Netflix. Uma usuyile lapho, faka ikhodi yephutha noma umyalezo obukade uwuthola ngqo kubha yokusesha. Ngemuva kwalokho, iNetflix izokunikeza imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi ungayilungisa kanjani le nkinga.
Imithwalo yeNetflix Kodwa ayikuvumeli ukuthi udlale isihloko:
Uyabona konke kubukeka kujwayelekile. INetflix isebenza kahle impela, futhi ungabona zonke izihloko zikhonjisiwe ngaphandle kwenkinga. Kepha, inkinga iqala lapho uzama ukudlala isihloko, akukho lutho olusebenzayo. Uma i-Netflix yakho isesikhathini bese uqhubeka uvuselela kaninginingi bese uzama ukudlala i-movie. Kepha, noma kunjalo, awukwazi ukuyidlala kungahle kube nethuba lokuthi le nkinga ingaphezu kwakho. INetflix ingahle ibe PHANSI ngeqiniso.
Yebo, udinga ukuqiniseka ukuthi iNetflix izolungisa zonke izingqinamba obukade ubhekene nazo. Uma ngabe uke wazibuza ukuthi ngabe iNetflix iphansi ngempela yini noma ngabe nguwe nje obhekene nale nkinga ngenxa ye-intanethi yakho, ungabheka i-IS NETFLIX DOWN? Ikhasi ozokwazi ukulithola esikhungweni sosizo sesevisi yokusakaza.
Uma uthola ukuthi i-Netflix empeleni iphansi, ungashayela noma nini i-Netflix noma uxoxe bukhoma nanoma yimuphi umsebenzi weNetflix.
Ungaxhumana nenombolo yesevisi yamakhasimende yeNetflix engu- (1-866) 579-7172. Uma ufuna izinto zihlelwe ngokushesha, kuzodingeka ukuthi ulungiselele ikhodi ye-akhawunti yakho. Uzothola kalula ikhodi yakho ye-akhawunti ngokumane uskrolele ezansi kwekhasi lakho lasekhaya le-Netflix bese uchofoza ku-Service Code.
Ungathola futhi izixhumanisi zokuphila ukuze uxoxe nazo ezitholakala kunoma yiliphi ikhasi lesikhungo sosizo seNetflix uqobo.
Uma inkinga iqhubeka lapho-ke into engcono kakhulu ongayenza ukulinda inkinga ixazululwe. I-akhawunti ye-Twitter yeNetflix ibilokhu ithola izikhalazo eziningi futhi ibuye ibe yinhle ekuxazululeni izinkinga ngokushesha.
Ukuthembeka, noma ngabe kwenzakalani noma kungaba yini inkinga, zama ukungatatazeli noma uthukuthele ngakho ngoba iNetflix ingenye yezinsizakalo zokusakaza ezithembeke kakhulu laphaya. Uma iphansi manje, mhlawumbe izobuya maduzane lapho inkinga isixazululiwe.
Ungahle ubhekane nezinkinga ezinjalo lapho ungaze uzizwe sengathi iNetflix iphansi okungase kukwenze uthukuthele ngezinye izikhathi. Konke ongakwenza, hlola ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi futhi uqiniseke ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza lweNetflix lusesikhathini njengoba ungahle ubhekane nalezi zinkinga ngoba uhlelo lwakho lokusebenza lweNetflix ludala. Uma lokho kusebenza, kuhle. Uma kungenjalo, ungavele uzame ukuthola inkinga ngokuya esikhungweni sosizo seNetflix noma ushayele inombolo yabo yesevisi yokunakekelwa kwamakhasimende noma ungahle uxoxe nabo futhi uthole ukuthi yini inkinga enkulu. Uma namanje lokho kungasebenzi, ongakwenza nje ukulinda i-Netflix ukulungisa inkinga bese uzokwazi bukela kakhulu njengama-movie noma imibukiso ye-TV ufuna.
I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 - Uyini Umehluko?
Ama-Emulators ahamba phambili wePS4 weWindows PC (2020)
Ibhokisi le-Android TV elihamba phambili 2020 - Kumele Ufunde (Izibuyekezo)
Amathiphu namasu angama-AirPod angama-21 Okufanele Ukwazi
Ungasithola Kanjani Isivivinyo Samahhala se-NordVPN sezinsuku ezingama-30?
Imibono nezeluleko ezinhle kakhulu ze-Minecraft Skin (2020)
Ungazivala Kanjani Izinhlelo ku-iPhone 12?
Zoom for Windows 10 - Ungalanda Kanjani & Ufake?
Ungawathola kanjani amakhodi wamahhala we-Xbox Live?
Amabhodi wamama we-Z390 ahamba phambili weGaming - 2020 (Izibuyekezo)
Ungayisetha kanjani i-Xbox usebenzisa Ucingo nge aka.ms/xboxsetup?
I-VPN ehamba phambili yeDisney Plus (2020) - Buka noma ikuphi kalula
ibhokisi le-movie online mahhala
uhlu lweziteshi ku-android tv box
kuza ebusuku megashare
ungawabuka kanjani ama-movie online mahhala ungabhalisi
imidlalo yemijaho engavinjelwe esikoleni
ungayibuyisa kanjani i-akhawunti ye-roblox ephelisiwe
phezulu 10 khulula horror imidlalo
Ezokuzijabulisa Ungakwenza Kanjani Amakhuphoni Izesekeli Ukudlala Izipesheli Buyekeza Ama-Softwares Izinhlelo Zokusebenza I-Vpn Pc Uhlu Amagajethi Komphakathi
© 2021 | Wonke Amalungelo Agodliwe